एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप- नेपालका मिडियाको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ ! - Everest Dainik - News from Nepal
एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप- नेपालका मिडियाको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ !
काठमाडौं, पुस १२ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालका मिडियाको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको प्रतिनिधिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जे–जस्तो काम गरेपनि नेपाली मिडियाले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने गरेको बताए ।
नेपाली मिडियाप्रति असन्तुष्ट हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका ओलीले भने– ‘यो सरकार गठन भएको ५ महिना भयो, संक्रमणकालिन अवस्थामा मेरो सरकार ढालेर अर्काे सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले सिन्को नभाँचेनी नेपाली मिडिया चुप छन, तर हिजो मेरो पालामा ४० मन्त्री हुँदा के के भनियो, अहिले त ४० प्लस हुँदापनि मिडियाले केही भन्दैनन्, समझदारी गज्जब कै छ ।’
याे पनि पढ्नुस ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन भन्दा गुरिल्ला ट्रेल र आफू दुईचार दिन बास बसेको घरमा संग्रहालय बनाउँन हिडेकोले निकास ननिस्किएको दाबी गरे । उनको आरोप थियो– ‘आफू दुई चार दिन बास बसेको घरमा संग्रहलाय रे कस्तो अचम्म ? आफूले ओढेको सिरक, डस्ना र कम्बल त्यो राख्ने हो र ?’
याे पनि पढ्नुस जोमसोम पुगेर ओलीले भने- मेरो सपना पूरा भो
उनले सरकारले तीनै तहको चुनाव गराउन संसद चल्न नपर्ने उनले जिकिर गरे । ओलीले प्रश्न गरे– चुनाव घोषणा गर्नको लागि संसद किन चाहियो ?
अध्यक्ष ओलीले सरकार मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा लागेकोले समस्या झन गहिरिएको आरोप लगाए ।
‘साउन १९ गते कांग्रेस, माओवादी र सर्लाही महोत्तरीमा आधारित मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उहाँहरुबिच अभ्यास हुँदैछ, तर त्यस प्रयासमा आवेशयुक्त ढंगको प्रयासले कुनै महत्व राख्दैन्, हेर्दै जानु होला, त्यो पछि थाहा हुन्छ,’ ओलीले भने ।